War deg deg ah: Ururka Al Shabaab oo dagaal culus kula wareegay Degmada Afmadow | WEEJIDOW
« War deg deg ah: Ciidamo ka socda Dalalka Jabuuti iyo Burundi oo la geeyay Cadaado
War deg deg ah: Qarax OO caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho »
War deg deg ah: Ururka Al Shabaab oo dagaal culus kula wareegay Degmada Afmadow
WAAJIDPRESS – 23 OCTOBER 2016:
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa muddo saacado ah la wareegay gacan ku haynta Degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose, ka dib markii ay weerar ballaaran ku soo qaadeen Degmadaasi.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa saqdii dhexe ee xalay dhawr jiho ka soo weeraray Degmada Afmadow, iyagoona la wareegay Saldhiga Booliska, Xarunta Maamulka Degmada iyo fariisimooyinka kale, ee Ciidamada Jubbaland ku leeyihiin Degmadaasi.
Ka hor inta aanu dagaalku bilaaban, ayay Shabaabku hawada ka saareen isgaarsiintii ka jirtay Degmadaasi, waxayna gudaha u galeen xarumihii ay kala wareegeen Ciidamada Jubbaland.
Mustaf Daahir oo ka mid ah shacabka deegaanka, ayaa dagaalkan ku tilmaamay mid ay si wayn isugu fara saareen dhinacyadii uu u dhaxeeyay.
Mustaf, ayaa yiri “Abaarihii 1-dii habeenimo ee xalay, ayaa waxaa magaalada ka qarxay dagaal aad iyo aad u xoogan, ka dib markii ay soo weerareen dagaal-yahanada Al Shabaab oo wata gaadiidka dagaalka.”
“Dagaalkan, ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, xaabadda ayaa is qabsatay magaalada, waqtiguna wuxuu ahaa waqti ay hurdaan shacabka reer Afmadow.”
“Ciidamada Jubbaland oo saldhigyo ku leh magaalada waa lagala wareegay, Al Shabaab ayaana la wareegtay gebi ahaanba magaalada. Qiyaastii hal saac markii uu dagaalka socday ayay magaalada isaga baxeen Ciidamadii Jubbaland.”
“Al Shabaab lix saacadood oo xiriir ah ayay haysatay magaalada. Ciidamada Al Shabaab ayaa hawlgalo ka sameeyay meelihii ay gacanta ku dhigeen, saakay 7-dii subaxnimo ayayna ka baxeen magaalada.”
“Ciidamada Kenya oo xero ku leh meel qiyaastii 4km u jirta Magaalada Afmadow, ayaan u soo gurman Ciidamada Jubbaland, intii uu dagaalku socday. Al Shabaab ayaa madaafiic ku weerartay xerada Kenyanka, wadooyinka xerada soo galana ciidamo ayay ku daadiyeen, si aysan u soo gurman.”
Dagaalkan, ayaa sababay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeedba, iyadoo khasaaruhu uu u badan yahay dhinacyadii wada dagaalamay, waxaana jira waxyeelo ka soo gaartay rayidka, inkastoo ay adag tahay in faah faahin dhameystiran laga helo inta uu khasaaruhu gaarsiisan yahay.
Dhinaca kale, Ciidanka Al-shabaab ayaa si buuxda maanta ula wareegay gacan ku heynta deegaanka Halgan Kadib markii ay isaga baxeen ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Ciidanka Dowladda iyo kuwa itoobiya ayaa gabi ahaanba faarujiyay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan.
Wariye ku sugan magaalada Baladweyne ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada Itoobiya ay saaka aroortii hore isaga baxeen saldhigyadii ay uga sugnaayeen Deegaanka Halgan oo qiyaastii 45 KM ujirta magaalada Buula Barde ee gobolka Hiiraan.
La wareegitaanka Shabaab deegaanka ka dib ayaa la maqlayay rasaas xoogan oo ay ridayeen ciidanka Al-shabaab,taasi oo dadka deegaanka ay ku reebtay cabsi.
This entry was posted on Oktoobar 23, 2016 at 4:41 g and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.